सताब्दीपुरुष सत्य मोहनको गुनाशो : महानगरले दिएको गाडी कहाँ राखौ ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
सताब्दीपुरुष सत्य मोहनको गुनाशो : महानगरले दिएको गाडी कहाँ राखौ ?
ललितपुर– शताब्दी पुरुष डाक्टर सत्यमोहन जोशीले उनकै सम्मानका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सोमबार सबैलाई हँसाए। ‘भूकम्पले भत्केको घर त राम्रो बनाउन सकेको छैन। यो मोटर कहाँ लगेर राख्ने हो। तनाव छ’, ९८ वर्षीय जोशीले ललितपुर महानगरले आफूलाई उपलब्ध गराएको गाडी राख्ने स्थान नभएको बताइरहँदा हल हाँसोले गुञ्जियो।
‘खानपान, हिँडडुल गर्दा होस् पुर्‍याउनुपर्ला’, रसिक भावभंगीमा देखिएका उनले भने। जोशीलाई सम्पर्क गर्न सजिलो होस् भनेर महानगरले सामसुम ग्यालेक्सी एस सेभेन मोबाइल पनि उपलब्ध गराएको छ। महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महानगरले उनलाई सम्मानस्वरुप गाडी, ड्राइभर तथा सुरक्षा गार्ड र सम्पर्क स्थापित गर्न सजिलो होस् भनेर मोबाइल उपलब्ध गराएको बताए। जोशीको सुरक्षार्थ नगर प्रहरी तिजकुमार महर्जन र सवारी चालक सानुलाल महर्जन खटिएका छन्। सवारी तथा मोबाइलमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले नै व्यहोर्ने छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।